Ismaaciil Shire Jaamac Buraale: Filashada waxqabasho ee Madaxweynaha daljoogta ah Deni iyo xasuusta Gaas (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 14, 2019 1:53 b 0
Madaxweynaha cusub ee Puntland waxaa la doortay, lana dhaarshay 8dii bishaan aynu ku jirno ee Janaayo, waana madaxweynaha Puntland ee 5ta sano ee soo socota, uuna ka mid yahay sannadkaan haatan horraantiisa aynu ku jirno.
Deni ma ahan nin ku cusub siyaasadda, horayna xilal siyaasadeed ayuu u soo qabtay oo uu kamid yahay wasiirka qorshaynta ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Waa daljoog, waxaana loo tiriyaa ogaalkiisa dad iyo deegaan ee Puntland in uu wax badan ka badsado madaxweynayaal ka horreeyey oo Puntland soo maray, waana mid ka mid ah damacyadii dadweyne ee Puntland ee doorashada ka hor, taasoo muujinaysay madaxweynaha loo baahanyahay in uu noqdo mid daljoog ah.
Ismaaciil Shire Jaamac Buraale waa siyaasi horay Puntland uga soo noqday wasiirka dekedaha iyo kalluumaysiga Puntland.
Buraale, waxay aad isku yaqaaniin, muddo dheerna ay saaxiibo isku dhaw ay ahaayeen madaxweyne Siciid Cabdillaahi Deni, wuxuuna iiga warramay wuxuu ku yaqaanno madaxweyne Deni, waxa laga fili karo, iyo sidoo kale waxyaabaha lagu xasuusan doono madaxweynaha hadda kursiga bannaynaya ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.